Ngaba ukukhanya kwe-UV engama-222nm kukhuselekile?
Zininzi ii-wavelengths ezahlukeneyo ngaphakathi kwe-UV ebanzi, nganye inesicelo sayo kunye neprofayili yokhuseleko. Ukuphakama kwamaza aphezulu njenge-UVA kunye ne-UVB kunokuba yingozi kwimpilo yakho, kodwa i-UVC 222nm ikhuselekile kwiindawo ezingena ngaphakathi ...
Ukusebenza kwe-222nm Ultraviolet Light kwi-Disinfecting SARS-CoV-2 Surface Contamination
Uphononongo olwenziwe ngontanga olupapashwe kwiJenali yaseMelika yoLawulo losulelo luvavanye ukusebenza kwe-Far-UV 222 nm ngokuchasene ne-SARS-CoV-2 (intsholongwane ebangela i-COVID-19) kumphezulu. Kolu phononongo, idosi ethobekileyo ye-Far-UV 222 nm ye-3 mJ / cm2 ikhokelele ekunciphiseni i-99.7% kwi-SARS-CoV-2 "esebenzayo" ...
UKUQHUBA I-COVID-19: UKUSETYENZISWA KOKUKHANYA KWE-ULTRAVIOLET UKUQINISISA I-CT SCANNers
Izikena ze-CT zibalulekile ekuboniseni izifo zemiphunga kubandakanya i-COVID-19, kodwa ukubulala iintsholongwane koomatshini phakathi kokusetyenziswa kuthatha ixesha. Iqela elinye labaphandi lisenokuba lifike kwisisombululo. UVanessa Wasta kunye noSarah Tarney / Ipapashwe nge-8 kaDisemba ngeenzame zokuhambisa ukuhamba kweengcinga zonyango, uphando ...
Uhlobo lokukhanya kwe-UV olubizwa ngokuba yi-Far-UVC lukhuselekile ukuba lungasetyenziswa ngabantu kwaye lubulale> iipesenti ezingama-99.9 zeAirborne Coronaviruses:
Nge-25 kaJuni ka-2020-Ngaphezulu kwama-99.9% eekoronavirus zonyaka ezikhoyo kumathontsi aphefumlelweyo abulawa xa evezwe kubude obuthile bokukhanya kwelanga okukhuselekileyo ukusebenzisa abantu, isifundo esitsha e-Columbia University Irving Medical Centre ifumene. "Ngokusekelwe kwiziphumo zethu, ...
Ngaba ukukhanya kwe-UV kungayibulala iCoronavirus eNtsha?
Ukukhanya kwe-Ultraviolet (UV) luhlobo lwemitha. Inamandla ngakumbi kunamaza erediyo okanye ukukhanya okubonakalayo kodwa amandla amancinci kunee-X-reyi okanye ii-gamma ray. Unokuvezwa kukukhanya kwe-UV ngokukhanya kwelanga kwendalo okanye ngemithombo eyenziwe ngabantu enjengemibhede yokuqhawula. Ukukhanya kwe-UV kuye kwasetyenziswa njengendlela yokubulala iintsholongwane ezinje nge ...
Yintoni itekhnoloji ye-UV kunye ne-UV-C
Yintoni i-UV? Idla ngokubizwa ngokuba kukukhanya kwe-ultraviolet, kodwa i-UV luhlobo lweemitha ze-electromagnetic ezinee-wavevels ezimfutshane kunokukhanya okubonakalayo kwaye zide kune-X-ray. Imitha ye-UV iwela kumacandelo amathathu kuxhomekeke kubude bayo: UVA, UVB kunye ne-UVC. Mfutshane ubude bamaza, mor ...
IYunivesithi yaseKobe kunye ne-Ushio Prove 222 nm Ukukhanya okukude kwe-UV-C kunciphisa ukubalwa kwebacteria kwaye kubangele akukho monakalo kulusu lwabantu
Imitha ye-Ultraviolet radiation C (UVC) ichazwa njenge-100 - 280 nm wavelengths UV. I-UVC evela kwi-UV yelanga ayinakufikelela kumphezulu womhlaba, kuba olu luhlu lwe-UV lutsalwe ngumaleko weozone. Ukukhanya okuqhelekileyo kwe-UVC light (254nm wavelength) kunokusetyenziselwa ukubulala iintsholongwane kwiindawo ezingenabantu ezinje nge ...
Yintoni i-UV-C ezisa amandla elanga ngaphakathi
Yintoni i-UV-C ezisa amandla elanga ngaphakathi endlini I-UV Spectrum UV-A, UV-B, kunye ne-UV-C zonke ziyinxalenye yesibane sokukhanya se-ultraviolet. Iziphumo ze-UV-A kulusu lolusu kwaye zisetyenziselwa amayeza ukunyanga ukuphazamiseka kolusu. I-UV-B inesakhono esiphezulu sokungena kunye ne-r ...
Izibane ze-UV kunye nezibane: i-Ultraviolet-C Radiation, ukubulala iintsholongwane kunye neCoronavirus
Ngenxa yokuqhambuka kwesi sifo seCoronavirus Disease 2019 (COVID-19) esibangelwa yinoveli ye-coronavirus SARS-CoV-2, abathengi banokuba nomdla wokuthenga izibane ze-ultraviolet-C (UVC) ukuze zibulale iintsholongwane kumphezulu wasekhaya okanye kwiindawo ezifanayo. I-FDA ibonelela ngeempendulo kwimibuzo yabathengi malunga ...
Izibonelelo ezi-6 zokusebenzisa ukukhanya kwe-UV ngeNtsholongwane
Iindlela zemveli zokubulala iintsholongwane bezisetyenziswa kangangeenkulungwane- kodwa ngaba zilungile ngokwaneleyo? Inyaniso kukuba kwaneyona ndawo icocwa ngamanzi ashushu, iblitshi kunye nezibulala-ntsholongwane zingaphoswa ziintsholongwane eziyingozi. Kwimeko enzima kakhulu, ezo zinto zinokubangela ukugula okanye nokufa. ...
Iibhaktheriya kunye neeVirus kunye nokukhanya kwe-UVC kunokuzibulala?
Yintoni iibhaktheriya kunye neentsholongwane? Intsholongwane kunye neentsholongwane zinokuhamba emoyeni, zibangele kwaye zisiba mandundu izifo. Bangena emoyeni ngokulula. Xa umntu ethimla okanye ekhohlela, amanzi amancinci okanye amathontsi emifinya azaliswe ziintsholongwane okanye ibhaktiriya ichithakala emoyeni okanye iphelela ezandleni apho zisasazeka khona ...